डा. शर्मासँग भानुभक्तलाई दाँज्न सुहाउँदैनः लिम्बू – Makalukhabar.com
डा. शर्मासँग भानुभक्तलाई दाँज्न सुहाउँदैनः लिम्बू
२०७४ जेष्ठ १५ गते प्रकाशित 33 0
नेपाली काँग्रेस मोरङ जिल्ला सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुन्, मानबहादुर लिम्बु । आउँदो मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचनका मोरङका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीलाई विजयी गराउन तथा क्रियाशिल सदस्य एवं उम्मेद्वारहरुलाई सहजरुपमा मतदाताहरु समक्ष पुग्ने वातावरण मिलाउँदै आएका लिम्बु विषेश गरी मोरङ क्षेत्र नं. ३ का लागि बढि चिन्तित छन् । आफ्नो गृह क्षेत्र समेत रहेकोले यो पटक बाम किल्ला भत्काएर कांग्रेसको चारतारे झण्डा गाड्नु उनको पहिलो उद्देश्य हो । यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि डा. सुनिल शर्मा प्रतिनिधिसभाका लागि नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् भने, प्रदेश सभा (क) का लागि सुयर्मा राज राईलाई जिताउने जिम्मेवारी उनकै कँधमा छ । मोरङ–३ को मुख्य समस्याका रुपमा सुकुम्बासी बस्ती, चिसाङ्ग र डाँस खोला कटान, स्वास्थ्य र शिक्षा रहेकोे बताउने लिम्बूले कांग्रेसले यीनै समस्या समाधान गर्ने र जनतालाई विकासका सबै पूर्वाधार दिने ठोकूवा गर्नुहुन्छ । निर्वाचनको माहौल, जनताका अपेक्षा रणनीतिका विषयमा मकालु खबरले गरेको कुराकानी :
तपाईको राजनीतिक यात्राबारे छोटो परिचय गराउनुस न ?
प्रजातन्त्रका लड्ने नेताहरुलाई रिहाई गर्न ०४२ (सत्याग्रह) सालमा आन्दोलनमा उत्रिदा पक्राउ परे । त्यतिबेला भातृ संगठनहरु नेविसंघ (नेपाल विद्यार्थी संगठन) र अखिल स्थापना भइसकेपनि म नेवि संघमा होमिइसकेको थिइन । पछि विद्यार्थी संगठनकै नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकोले नेवि संघमा प्रवेश गरे ।
०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भएर मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान पुर्याए । त्यसपछि तत्काल बुटवल महाधिवेशन हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाए । एनपी साउद र नविन्द्रराज जोशीबीच घम्साघम्सी पर्यो । अन्त्यमा एनपी साउद सभापति बने । ०४९ सालमा सभापति एनपी साउदको पहिलो केन्द्रीय बैंठकले क्षेत्रीय समिति देशभर निर्माण गर्ने योजना ल्यायो । यससँगै मैले मोरङ क्षेत्र –४ को क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारी पाए । क्षेत्रीय सभापति हुँदै जिल्ला सभापति बने । यसरी जिल्लामा पार्टीको उपसभापति, सभापति हुँदै तीन कार्यकाल क्षेत्रीय सभापति भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको छु ।
मोरङ ३ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल कस्तो छ ?
विकासलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर कम्युनिष्टले एकछत्र राज गरेको यो क्षेत्रको विकास गर्ने होनाहार युवा शक्तिहरु यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्रका दुःख बुझेका र ‘अकबरे खुर्सानी’ झैं बनेर बाहिर आएका व्यक्ति हुन्, डा. सुनिल शर्मा । जसले नेतृत्व गरेको समूहले मात्रै यहाँको जनतामा विकासको मुहार फेर्न सक्छ । अहिलेको आवश्यक्ता भनेको पार्टी हैन, पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ब्यक्ति हो । नेपाली कांग्रेसले उठाएका सबै उम्मेद्वारहरु यहाँका जनताको मनमस्तिस्कमा बसेका छन् । हामीले घरदैलो कार्यक्रम गरिरहँदा जनताबाट पाएको आश्वासन, उनीहरुमा देखिएको उत्साहले यसपटक यो क्षेत्रमा बाम गठबन्धन परास्त भएर नेपाली कांग्रेसले चारतारे झण्डा गाड्नेमा म ढुक्क भएको छु ।
विगतमा बाम किल्ला रहेको यो क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले चुनाव जित्ने आधारहरु के के देख्नुहुन्छ ?
अहिले यो क्षेत्रमा काँग्रेसले जित्ने आधारहरु के के हुन् भन्दापनि किन जित्दैछ काँग्रेसले ? भन्ने नै प्रमुख विषय हो । यो क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरुले लामो समयदेखि एकछत्र राज गर्दै आएपनि यो क्षेत्रको विकासको नाममा सिन्को भाँचेनन् । हरेक निर्वाचनमा जनतालाई मिठामिठा भाषण गरे तर, आफुले गरेका आधारभूत बाचा पनि पुरा नगरेपछि अहिले यहाँका जनता पार्टी परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा छन् । एक हिसाबले उनीहरुले यो क्षेत्रमा बल नै प्रयोग गरेर राज गरेका थिए भन्दा फरक नपर्ला । तर, अब त्यस्तो राजको अन्त्य गर्न काँग्रेस उदाएको छ । डा. सुनिल शर्मा त्यसको अन्त्य गर्ने नायक हुनेछन् । अब यहाँका जनताको विकास, यो क्षेत्रको विकास भनेको डा. सुनिल शर्माको नेतृत्वमा नै हुनेमा जनता ढुक्क भएका छन् । डा. शर्मा लामो समयदेखि यहाँको समाज सेवामा चिरपरिचित नाम हो । हामीले यहाँको चुनाव जित्ने आधार नै हाम्रा योग्य कर्मठ उम्मेद्वार, विगतका कम्युनिष्टहरुले जनतालाई दिएका झुटा आश्वासन र कांग्रेसले विकासप्रति लिएको उदार निती नै हो ।
जनताले तपाईहरुलाई जिताएर सत्तामा पुर्याए पछि पुनः पुरानै प्रवित्ति दोहोरिन्न भन्ने जनताले कसरी विस्वास गर्ने ?
हो, यो कुरामा जनताको सन्देह हुनु कुनै नौलो कुरा हैन । हामीले विगत चार दशकदेखि एकै खाले पद्दति र विचारधारा भएका जनताका पिरमर्का नबुझ्नेलाई शक्ति र सत्तामा पुर्यायौं । यसले जनतामा जसलाई भोट दिएपनि उस्तै हो भन्ने भएको थियो । तर, यसपटक परिस्थिति बदलिएको छ । जनता पनि कसले काम गर्न सक्छ, कसले सक्दैन, कसले झुट्टा कुरा गरेको छ, कसले गरेको छैन छुट्याउन सक्ने खुवी पनि छ ।
डा. सुनिल शर्मा चुनावी अभियानमा गाउँगाउँ घरघरमा गईरहँदा उहाँले कुनै फोस्रा आश्वासन बाँड्नु भएको छैन, कुनै तिलस्मी कुरा गर्नु भएको पनि छैन । उहाँले जनताका आधारभूत आवश्यक्त के हो, यहाँको समस्या के हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु भन्नुभएको छ । यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय छैन, स्वच्छ खानेपानी छैन, विरामी हुँदा आधारभूत उपचार गर्न सक्ने सम्मका अस्पताल छैनन्, ग्रामिण क्षेत्रमा कालोपत्रे भएका सडक छैनन्, बर्षेनी सर्पदंशका कारण दर्जनौ मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउने दुखःद् अवस्था छ यीनै आधारभूत आवश्यक्ताका लागि उहाँले जनतालाई भोट दिन आग्रह गर्नुभएकोले जनतामा उत्साह छाएको छ ।
विगतमा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताले के कस्ता विकासका योजना ल्याए र ल्याउन सकेनन् ?डा. शर्माको जित सुनिश्चित भइसकेको छ, जनताले घरदैलोमा फुलमाला लगाईसक्नु भएको छ, २१ गतेको निर्वाचनमा जनताले मत जाहेर गरेसकेपछि उहाँलाई आधिकारिक रुपमा फूलमाला लगाउन मात्रै बाँकी हो ।
लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कम्युनिष्टले एकतन्त्रीय जस्तो शासन सत्ता चलाउदै आएको छ । अहिले साविक २, ३ र ८ वडालाई समायोजन गरेर ३ नम्बर क्षेत्र बनाइएको हो । ०४८ सालदेखि यी क्षेत्रमा पटक पटक कम्युनिष्टले जित हात पारेपनि विकासको कुनै मुहार फेरिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक, खानेपानी, आधुनिक कृषि योजना यस्ता धेरै आश्वासन बाँडिएको थियो तर, तप्न दशक भईसक्दा पनि कुनै योजना पुरा भएनन् ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने, यहाँबाट राजनीति गरेका अथवा लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहेकाले जनताका आधारभूत आवश्यक्ता र समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक नलिएकै हो । जनताले लामो समयसम्म पनि विकासको प्रतिक्षा गरेपनि अब, धैर्यताको बाँध भत्किएको छ । अब जनताले नेतृत्व परिर्वतन गर्दैछन् ।
तपाईहरु डा.सुनिल शर्माको उम्मेद्वारीकै कारण यहाँ जित्ने आधार देख्नुहुन्छ की साच्चिकै जनता यसपटक परिवर्तनको पक्षमा छन् ?
हो, एक हिसाबले डा.सुनिल शर्माले उम्मेद्वारी नदिएको भए यहाँ काँग्रेस कमजोर हुन्थ्यो । यस क्षेत्रमा काँग्रेस सैद्धान्तिक मतले एमालेभन्दा थोरै मतान्तरले पछि रहँदै आएको छ । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । यहाँका स्थानीय जनताका जिब्रोमा डा. सुनिल शर्माभन्दा अरु उम्मेद्वारको नाम उच्चारण भएको छैन । भने, पछिल्लो समय कांग्रेस वाहेकका पार्टीले यहाँका जनताका विचार र मागलाई आत्मसात नगरेको कारण पनि जनतामा कांग्रेस प्रति सद्भाव र विस्वास बढेको हो । यसमा जनताको चाहना र डा. शर्माको उम्मेद्वारी विच दुवै पक्षको बराबर देखिएका छन् ।
लामो समयदेखि पार्टीमा लाग्नुभएको तपाई पनि त उम्मेद्वारको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो नि ?
हो, म पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारको आकांक्षी थिए । पार्टीले डा.सुनिल शर्मा, हंसिदेवी खवास र म हामी तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । तर, हंसिदेवी जी र मैले डा.सुनिल शर्मा नै यो क्षेत्रका लागि योग्य उम्मेद्वार देख्यौं । फेरि हामीले यो क्षेत्रको दुःख बुझेनौँ भन्न खोजेको होइन । क्षमता भएका जो सुकैलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र हामी दुवैले डा. शर्मामा त्यो क्षमता देखेर नै समर्थन गरेका हौं । र, पार्टीले पनि हाम्रो निर्णयलाई सहजै स्वीकार गरिदियो । सबैलाई लाग्न सक्छ, राजनीतिक हिसाबले म भन्दा उहाँ जुनियर नै हुनुहुन्छ । तर, सामाजिक हिसाबले उहाँ धेरै अघि हुनुहुन्छ । यो समाजलाई केही दिने ल्यागत भएकोले मैले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ राख्न सकिन । उहाँ यो समाजका लागि चाहिने मान्छे हो ।
एमाले–माओवादीको बाम गठबन्धनमा गणीतिय हिसाबले भोट बढि छ, यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले नै जित्ने आधार नै कसरी देखिन्छ ?
विगतको स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यस अघिका निर्वाचनका मतले मात्र अहिले जीतको सुनिश्चितता गरिएको हैन, मैले माथी नै भनिसकें हाम्रा जितका आधारहरु । विगतका निर्वाचन त्रिपक्षिय (कांग्रेस, एमाले, माओवादी हुँदा एमाले बलियो भयो । अहिले केन्द्रमा बाम एकताको हावा फैलाएर एमाले–माओवादी भनिरहेपनि ग्रास रुटमा धेरै कार्यकर्तालाई यो गठबन्धन मन परेको मात्र छैन, अहिले दैनिक तीन चार सय जनता ती पार्टी परित्याग गर्ने क्रममा छन् । यो एक प्रकारको हाम्रा लागी फाइदाजनक नै हो । भोली निर्वाचनमा हामीलाई मत दिने जनताले पनि डा. सुनिल शर्मा र भानुभक्त ढकाल विचको फरक देखिसकेका छन् । बाहिरबाट ‘टुरिष्ट’ पाहुना बनेर आएकाले यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने जनताले बुझेका छन् । तपाई ढुक्क हुनहोस् जनताले यसपटक कांग्रेसलाई बहुमतले जिताउँछन ।
तर, चुनाव त ‘कन्फर्म’ भानुभक्त ढकालले जित्छ भनिएको छ त ?
भानुभक्त ढकाल को हुन् ? भन्ने न मैले चिनेको छु न यहाँका स्थानीय जनताले नै चिन्नुभएको छ । पहिलो पटक ‘पाहुना’ बनेर आउनु भएको हल्ला सुनिएको हो तर देख्न पाएको छैन । उहाँ कालो सेतो कून वर्णको हुनुहुन्छ अनुहार समेत देखिएको छैन । यदाकदा सुनिए अनुसार तेह्रथुमबासी ढकाल काठमाडौँमा महल बनाएका उम्मेद्वार रे ! भन्ने चाहीँ सुनिन आएको थियो । तेह्रथुममा पार्टीले टिकट नदिएपछि तराईतिर झर्ने जिद्धि गरेपछि यहाँका स्थानीय नेताहरुको नाम कटाउन लगाएर बलजफ्ती गरेका रहेछन् । तर, उनलाई न यहाँका जनताले देखेका छन् न उनले यहाँको हावापानी झेलेका छन् । यहाँका स्थानीय नेता डा. शर्माको हैसियतमा भानुभक्तलाई दाँज्न उपयुक्त छैन ।
मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
मतदाताको एउटै सल्लाह छ, जस्ले समाजका लागि योगदान दिन्छ उसैलाई हामी सहयोग गर्छौँ । पार्टी हैन व्यक्तिको कार्यक्षमता, अध्ययन अनुभव र सकारात्मक विचारले देश सञ्चालन हुनेमा स्थानीयहरुको एकमत छ । अहिले डा.सुनिल शर्माले राज्यले पुर्याउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिगत तवरबाट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर स्थानीय जनतालाई उपलब्ध गराउँदै आउनु भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिचाई, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यक्ताका कुरामा उहाँको जोड छ । उहाँका यहि विचारका कारण यहाँका जनता उहाँको पक्षमा हुनहुन्छ । जनता डा. सुनिल शर्माको उम्मेद्वारी प्रति उत्साह छ ।
भन्न सक्नुहुन्छ बाम गठबन्धनसँग यति मतान्तरले जित्छौँ भनेर ?
एमालेले यति मतले म जित्छु भने पनि अहिलेको परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । यसकारण १६ हजार बेसीको मतान्तरले बाम गठबन्धन हार्ने निश्चित भइसकेको छ । २१ गते पछि यो क्षेत्रमा चार तारे झण्डा फहराएको सबैले देख्ने छौं ।
अन्त्यमा, यहाँका मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सम्पूर्ण आमा बुबा दाजूभाई दिदिबहिनीहरुमा मेरो आग्रह, एक पटक विगतका निर्वाचनमा हामीले जसलाई जिताएर पठायौं उनीहरुले यहाँको विकासका लागि केके गरे अन्र्तआत्माले समिक्षा गरौं । बारम्बार एउटै ब्यक्ति र विचारधारा भएको पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउँदा पनि हाम्रो जनजिविकामा हुनै परिवर्तन भएन । अब पनि त्यत्ति प्रवित्ति, त्यहि विचार दोहोरिन दिने हो भने, यो क्षेत्रले कहिल्लै मुहार फेर्न सक्दैन । यस पटक नेपाली कांग्रेसलाई विस्वास गरौं, डा. सुनिल शर्मा र सुयर्मा राज राईलाई विस्वास गरौं भन्न चाहन्छु ।